Waa maxay caymisku, si kasta? - Amjambo Africa
Waa maxay caymisku, si kasta?
Waxaa qoray Jeffrey Lee
Caymisku waa qayb muhiim u ah nolosha Mareykanka. Waxay ka ilaalin kartaa dadka burburka dhaqaale, haddii ay dhacdo in gurigooda uu gubto, gaarigooda uu shil gaari ku xumaado – ama ay waxyeelo u geystaan gaari qof kale leeyahay – ama si guul ah ayaa loo dacweeyaa, waxaana loo sheegaa inay lacag siiyaan qof kale.
Dadka badankood ma haystaan lacag ama hanti ku filan marka ay dhacdo musiibo oo ay ku bedesho ama si weyn u dayactirto midkood hantidooda (sida baabuur ama guri), ama hantida dadka kale. Si kastaba ha noqotee, haddii ay leeyihiin caymis, shirkaduhu waxay daboolaan kharashyada halkii. Bixinta caymisku waxay gaarsiisan tahay wixii dhaawac ah ee dadka kale uga yimaada shil.
Sidan oo kale, qof walba waxaa laga ilaaliyaa shilalka iyo dhacdooyinka haddii kale dhaqaale ahaan nolosha baabi’in kara. Caymiska sharci ahaan ayaa looga baahan yahay inuu ku shaqeeyo baabuur ama ganacsi, iyo inuu deyn ku helo guri.
Si loo qaado caymiska, macmiilku wuxuu siiyaa shirkad lacag yar, oo loo yaqaan ‘premium’. Tan waxaa la samayn karaa bil kasta, ama inyar oo soo noqnoqota, qaybo waaweyn, haddii siyaasad-qaadaha uu doorbido. Shirkaddu waxay ka soo ururisaa qiimo cayiman dad badan oo siyaasadda wax ka leh.
Kadib, marka mid ka mid ah kuwa siyaasadleyda ah uu shil galo, oo uu u baahan yahay inuu isticmaalo caymiskooda, waxay xareeyaan waxa loogu yeero sheegasho. Inta lagu guda jiro sheegashada, shirkadda caymiska ayaa bixisa wax alla wixii lacag ah ee loo baahan yahay, markaa qasab ma ahan in milkiilaha siyaasaddu bixiyo. Mararka qaarkood waxaa jira wax laga jari karo oo ku saabsan caymiska, taas oo ah xaddiga lacagta ee uu qofka mas’uul ka ahi masuul ka yahay muddada dalabku socdo.
Tusaale ahaan John wuxuu wataa siyaasad baabuur, oo uu ku bixiyo $ 70 bishii. Wuxuu ku dhacaa gaadhigiisa, waana la burburiyey. Shirkadda caymiska ayaa go’aamisay in John ay ku kici doonto $ 4,000 si loogu beddelo gaarigiisa mid ka mid ah isla sanadkaas, sameynta, iyo moodeelka. John waxaa laga jarayaa $ 500, marka shirkaddu waxay siisaa $ 3,500 si uu ugu beddelo gaarigiisa.
Way awoodi karaan inay tan sameeyaan, maxaa yeelay kumanaan kale oo siyaasad-dejiyeyaal ah ayaa sidoo kale shirkadda siiyay khidmaddooda bishaas, halka boqolkiiba in yar oo iyaga ka mid ahi u baahan yihiin inay fayl garaystaan. Marka John wuxuu helaa gaari bedel ah, in kasta oo kaliya uu bixiyo $ 70 bishiiba.
Fadlan raac taxanahan maqaallada billaha ah si aad wax uga ogaato mowduucyada sida
• Caymiska baabuurta ee liisanka darawalnimada ee caalamiga ah
• U kaxeynta Uber ama Lyft iyo saameynta khidmadaha caymiska
• Muhiimadda caymiska kireystayaasha, haddii aad kireysato guri ama aqal apartment
• Sidee si aad u hesho caymiska baabuurta kuwa aan horey u helin drivers
• Dareewallada da’da yar iyo caymiska baabuurta Ins · Caymiska meheraddaada cusub
• Caymiska gurigaaga cusub.
PreviousMadaxda Dowlad Goboleedyada ayaa ka wada hadlay nabada iyo xasiloonida Gobolka harooyinka waa weyn ee Afrika.
Nextwaxwalba waxay leeyihiin bilaw iyo dhamaad.